Igbo, Romans, Lesson 014 -- The Wrath of God against the Nations is Revealed (Romans 1:18-32) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 014 (The Wrath of God against the Nations)
NDI ROM 1:29-32
29 ebe ha juputara n'ajọ omume nile, ikwa-iko nile, ajọ ọria, anya-uku, obi ọjọ; juputara n'ekworo, igbu mmadu, esemokwu, aghugho, echiche ojoo; ha bụ ndị na-ekwu okwu nzuzu, ndị na-ekwu okwu azụ 30, ndị na-akpọ Chineke asị, ndị na-eme ihe ike, ndị mpako, ndị na-etu ọnụ, ndị na-echepụta ihe ọjọọ, ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, 31 ndị na-enweghị ntụkwasị obi, ndị na-enweghị ntụkwasị obi, ndị na-adịghị agbaghara, ndị na-enweghị obi ebere; 32 ndi mara, dika ezi omume Chineke si di, na ndi n omume ihe ndia kwesiri ọnwu, ọ bughi nání ha onwe-ha n mana kwa ihe ahu, kama ha nākwado ndi n omume ha.
Pol debere katọn nke mmehie n'ihu anyị dịka nkọwa nke Iwu Iri ahụ, ọ bụghị na anyị nwere ike ikwu maka okwu ndị a n'ụzọ dị mma, dịka ndị ọkà ihe ọmụma, ma ọ bụ tụọ ndị ọzọ ma jiri usoro ndị a maa ha ikpe, kama iji mata onwe anyị na egwu, ma lee ohere niile nke mmehie dị n’ime anyị. Onye b who onye naenweghi Onye Okike, juputara n'ihe ojuu na ikpé, n'ihi na mm] nke onye aj] omume naeweta nkpuru d various iche na nd are Mmo Nso. Madu bi n’ime Kraist, ma obu n’ajọ ajo onye ahu. Enweghị mpaghara ịnọpụ iche.
Onyenwe anyị Jizọs na Pọl onyeozi kwuru na ịkwa iko bụ mmehie mbụ. Adkwa iko na-agbaji njikọ nke ezi ịhụnanya, na-ehichapụ ntụkwasị obi nke ntụkwasị obi nke onye ọzọ, ma meghee ọnụ ụzọ nke ekweghị na Chineke na ekweghị ekwe. Ochicho obi nke mmehie juputara ndi nile juru onwe ha nike nke Chineke; ihe ka n'ọnụ ọgụgụ mmadụ bụ ndị na-akwa iko ma ọ bụ n'echiche, n'okwu ma ọ bụ n'omume. Ha rụrụ arụ. Know mara onwe gị? Akọ na uche gị na-agwa gị okwu nke ọma. Yabụ, agọnarị ihe ndị gara aga, ma kwupụta ihe i mere!
Imara na mmadụ na-enweghị Chineke abụghị onye ezi omume, kama ọ bụ onye ajọ omume? Kedu ihe kpatara ndị nkuzi si ekwu maka mmadụ, agụmakwụkwọ, na ọrụ mmekọrịta, ma ọ bụrụ na oke mmadụ n'onwe ya bụ ajọ omume na arụrụala? Anyị achọghị mgbanwe ma ọ bụ ịkọ ọrụ, mana okike ọhụụ, na imegharị uche na obi.
Onye na amaghi Chineke huru ego n’anya, ma wulite ndu ya n’elu chi a na - anwu. Ihụ ego n'anya na-eto etu o siri na-eto ego n'onwe ya. Na ewepu ya n'olile anya nke onye Kraist rue nganga na ntukwasi obi nke ndu ya, na ịchịkwa ajọ ihe na agụụ ihe ọjọọ.
Ndi nile obi ha juputara n’uju juputara n’ ojoo, aghugho, mmegwara, ihu ugha, aghugho, aghụghọ na aghugho. Onye-nzuzu n chèputa ihe ọjọ megide ndi-iro-ya na ndi-ab hisata-obi-ya. Ọ na-eme onwe ya ka ọ hụrụ ha n'anya, mana obi ya bụ akwụsị.
Ọtụtụ mgbe, ebumnobi nke nwoke ọjọọ bụ anyaụfụ na ekworo nke ndị ọzọ. Ọ naghị a rejoiceụrị ọ theụ na ngọzi nke ndị ọzọ, n'ihi na ọ chọrọ ịba ọgaranya karịa ka ọ na-eme. Ọzọkwa, ọ chọrọ ịba ọgaranya, mara mma karị, nwekwuo amamihe, ma nwee nsọpụrụ karịa onye ọ bụla. Ihe nzuzu na ekworo bu isi otutu omume ojoo a. Mgbasa ozi na-ejizi anyaụfụ na anyaukwu n'ebe ndị mmadụ nọ na-akwalite ngwa ahịa ọ bụla n'agbanyeghị ihe ọ bụla.
Udị agụụ ihe ọjọọ dị otú ahụ na-eme ka uche anyị gharazie ịdị mma, kama ọ na-emeghekwa ụzọ igbu mmadụ, ịkpọasị, nkwutọ ọjọọ na ikwutọ mmadụ. Buru n’uche na Jizọs kuziiri anyị na echiche naanị ịjụ ajụ, ileda ma ọ bụ ịkpọ ndị ọzọ asị bụ mmehie nke igbu ọchụ, n’ihi na ebumnuche anyị bụ ibibi ndị ọzọ. Anyị niile bụ ndị na-egbu ọchụ na ụmụ nke na-egbu egbu n'anya Chineke.
Mmụọ mbibi a pụtara ngwa ngwa n’okwu na omume anyị mgbe anyị na-eke nkewa na ndị ọzọ n’etiti anyị na ezinụlọ anyị, ebe Mụọ Nsọ na-eduga anyị n’udo na nghọtahie n’etiti ndị na-ese okwu, ka anyị wee bụrụ ndị na-eme udo. Gi nwere ihe kpatara ọgba aghara na nkewa n'etiti ụmụ nke nnupụisi? Gi na-etinye nkụ n’ọkụ? Ma-ọbụ ị na-eweta mgbaghara na idozi, ma na-ahọrọ ịkwụsị iro ahụ, ọbụlagodi na ị ga-achụrịrị onwe gị n’ọrụ ime ya?
Aghugho bu akparamagwa nke ekwensu, nke anaghi ahuta ya niile n’ime Onye nwe anyi. Onye ọ bula nke jiri aghughọ na-eme atụmatụ ya, ma jiri okwu ọma mata mmadụ n'ọnyà bụ nwa nke ajọ onye ahụ. Mkpụrụ nke Mụọ Nsọ bụ eziokwu, eziokwu, na ịkwụ ọtọ. Ma ịgha ụgha na alaka ya jọrọ njọ.
Mkpụrụ osisi nke ọzọ na hel na-ata ahụhụ, na-emebi aha mmadụ ibe anyị iji gosipụta aha anyị. Egbugbere ọnụ anyị jupụtara n ’imeju, ụkwụ anyị bukwara ibu na-emerụ ndị ọzọ. Anyị dị njikere ịgọnahụ ndị ikwu anyị kacha nso iji zọpụta onwe anyị ma webata onwe anyị na ịbụ onye a ma ama.
Ndi nile ndi n’eme mmehie ndia, n’amaghi ama ma obu n’etu ntamu, kpasoro Chineke isi, n’ihi na onye obula huru Onye nwe ya n’anya, hu ndi mmadu n’anya. Ma mgbe ikwuru ndi mmadu okwu n’emeghi ihe ọjọ, ma na eleda ha anya ma maa ha ikpe, mgbe ahu o bu mmuo nke na - agwa gi mmebi iwu ndia. Mgbe ị kpọrọ mmadụ asị, ị kpọrọ Chineke asị, n'ihi na Chukwu bụ ịhụnanya, onye na-adigide n'ịhụnanya na-anọgidekwa na Chineke, ma gbaghara, gọzie, ma hụkwa ndị na-adịghị ahụ n'anya n'anya, na isi iyi nke ịhụnanya.
Dika ekwensu ji nganga na ntukwasi obi ya, ya bu ndi ojo nile. Ha mara, n’ime obi ha, mmehie ha niile, jọrọ njọ, na adịghịzikwa, na n’ihi ihe ọmụma a, ha na-achọ ikpuchi mkpụrụ obi ha na-emerụ emerụ. Ha na-anya isi, na-aaggeụbiga ihe ókè, ha na -ewekwa isi ma na-anya isi dị ka echiche mmiri na-eche na ha na-eme onwe ha ihe atụ, mgbe ọ bụla ha na-eme onwe ha ihe ọchị. Ndị dị ka ndị a na-emekpa ndị ogbenye ihe ma na-akparị ndị niile dabere n'ebere ha. Ha n serveme ihe ọjọ ha nile, ha juputara na obi ojoo na nzuzu. Ha na-egosi na ha dị mma, nwee onyinye, ma dị mkpa, mana mgbe naanị ha nọ, ha na-anụ ka Chineke ji otu okwu na-ama ha ikpe: “ịb ụta”.
Mgbe ha na-ekpughere adịghị ike nke ndị ọzọ, na ọrụ ha maka obiọma, ha na-eme ka ikpe ọmụma ha dịwanye elu; mmụọ ọjọọ ha na-apụtakwa n’ezinụlọ ha n’ụdị nnupụisi. Ha adighi ele ndi nne na nna ha anya dika ndi nche ha dika iwu nke Chineke si di, kama ha jiri ego na inata ego, nnwere onwe na ikike n’enweghi nkwadebe maka oru, aja, ihunanya na oru. N'ụzọ dị otu a, ha na a theyụrị ọ theụ e nyere ha site na ndụ, na-eleda amaghị nke nne na nna ha na-agụghị akwụkwọ. Ha amaghi na nmehie bu nzuzu kasi elu, ebe egwu Chineke bu amamihe kasi elu. Ndi nile n’enyeghi oke na Mo nke Chineke anaghi aghota ihe o bula nke oma, kama ha na-ahu ihe nile n’azu. Ha atụfuola ụkpụrụ maka onwe ha na maka ọha mmadụ niile.
N’ọnọdụ a, ha ahụghị ike nke ikwesi ntụkwasị obi n’ime onwe ha, ya mere ha enweghị ntụkwasị obi. Ndị niile na-anaghị enyefe Chineke onwe ha enweghị ike isonyere ụmụ mmadụ. Ikwesighi ntu Chineke obi nke Chineke naeme ka mmad nwee ntukwasi-obi, mana onye n’enweghi Onye nwe ya na-ano n’ihu, na-akpafu, ma daa ogbenye.
Chineke anyị bụ ịhụnanya, ebere na ọmịiko. Ahuhu gādiri ndi nārapu isi-ha nma; n'ihi na obi-ha di ike dika nkume. Ha hụrụ onwe ha n'anya, kpọọ ndị ọzọ asị. Lee onwe gị! Gi hụrụ ndi iro gị n'anya? Na-emere ndị ogbenye ebere? Jizọs nwere ọmịiko maka ndị chụsasịrị ya, ọ tara ahụhụ site na mmehie ha. You na-ama ndị gị ikpe, ma ọ bụ na-ahụ ha n'anya? I bụ onye enweghị ebere na ọmịiko, ma ọ bụ mmụọ nke Chineke mere ka ị dịghachi ọhụrụ ka ị nwee ike iguzo n’iru ya dịka onye ụkọchi ịnọchite anya ndị mmehie?
Nmehie anyi kariri aja nke oke osimiri. Mara Chukwu, maraziezie onwe gị. Onye obula nke kewaputara onwe ya site na njimara nke isi mmalite ya kwesiri inwu na ikpe. Mmadu niile bu ndi mmehie site na nwata. Gi ga-anọrọ ọnwụnwa gị na mmehie gị taa. Di nso nke Chineke choro imebi gi. Inwere ike ịlanarị. Ikike nile nke mmadụ na-agha ụgha. Anyị nwere ike ịnwụ maka mmehie anyị. Na-awagharị n’obodo gị dị ka onye a mara ikpe ọnwụ, ọ bụghị n’aka mmadụ, kama ọ bụ Chineke. Yabụ, kedu mgbe ị ga-agbanwe obi gị, ma chegharịa kpamkpam na obi niile?
Ọ bụrụ na i chegharịghị kpamkpam, mmehie gị erute ebe ị ga - enweta afọ ojuju dị njọ na mmehie nke ndị ọzọ. Ọ bughi nání ihe ka gi onwe-gi n sinmehie, kama ọ bu kwa ndi n sinmehie ka i nātọ gi utọ; ma ya mere gbaa ha ume na ya, tufuo ya na ya, ma duhie ha n'ụzọ ezighi ezi, na-egosi ha njehie nke mmehie gị. Nke a bụ ihe ọjọ njo nke mmejọ ahụ. Ọ bụ ezughị na gị onwe gị bụ ndị ọjọọ? Mee dị mkpa ka imebi ọha mmadụ? Lee onwe gị! Ndi obi uto gi na mmehie gi? Ndi nwere afọ ojuju maka obi nke ndị ọzọ? Do naghị agbapụ anya mmiri, na nchegharị sitere n'obi, maka onwe gị na ndị gị? Mmụọ nke Chineke butere gị n’ezi nchegharị, ka ị ka bụ onye mpako?
EKPERE: Chukwu meela onye mmehie. Imara na mwepu ọbara m ọ bụla na-emehie, na n'ime mkpụrụ ndụ m, abụ m isi mmalite nke echiche ọjọọ. Enwere m ike ịla n'iyi n'iwe gị, ikpe gị zikwara ezi. Nwerem ihe a, Ebiakwala m dịka ikpe gị si dị. Gbanwee m ndị enyi m na ndị agbata obi m niile ka anyị ghara ịdaba na hel. Nye ndị m na mụ onwe m ihe ọmụma banyere mmehie na mgbanwe nke obi ị nwere ike ibido n’ime anyị n’ime ihe ekike ọhụrụ. Chineke, merem amara, dika ebere-Gi si di; Anarakwala m Muo Nso Gi.
Gini bu mmehie ise nke edere aha otutu, nke i lere anya di ka ihe kariri n’ụwa taa?
Iwe nke Chineke
E si n’eluigwe kpughee ya
megide ajọọ-omume na ajọ omume nile nke mmadụ.
(Ndi Rom 1:18)
Page last modified on January 25, 2021, at 02:51 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)